Magnesium L-threonate powder (778571-57-6) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Nootropics powder / Magnesium L-threonate upfu
Rating: SKU: 778571-57-6. Category: Nootropics powder
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kuhutano hweMagnesium L-threonate powder (778571-57-6), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Magnesium L-threonate powder ndechimwe chezvakanyanya kukanganisa munyika yemazuva ano ekumadokero, iyo inonyanya kunetseka inobatanidzwa nekugadziriswa kwemaminera mune zvinyorwa zve 300 zvinokonzera muviri muviri. Magnesium threonate ndeimwe yemhando dzakawanda dzebioavailable ye magnesium uye kunyanya kuwedzera ma magnesium muuropi.
Magnesium L-threonate powder video
Raw Magnesium L-threonate powder basic Characters
Name: Magnesium L-threonate powder
Molecular Kurema: 294.49
Melt Point: 648-651 ° C
Storage Temp: RM
Color: chena kana kuti chena chena cristalline powder
Raw Magnesium L-threonate powder mukusimudzira uropi hunoita uye kuwedzerwa kwekuwedzera
Raw Magnesium L-threonate powder Usage
Iko yakakwana yemamero inonzi magnesium threonate inenge yakapoteredza 1-2 gramu kuitira kuti ipe chikamu chakaderera zvikuru che elemental magnesium. Uwandu hwehupupuri hunoratidza kumativi ose e200 mg ye elemental magnesium zuva rega rega uye threonate ndechimwe chezvinhu zvakanakisisa zvinobva.
Warning on Raw Magnesium L-threonate powder
Icho chirwere chinokonzera magnesium chinopesana zvichienderana nekuwanda kwemuviri wemuvirizi, naizvozvo hausi mizhinji migumisiro yemigumisiro inobatanidza nekuwedzera. Kana paine magnesium yakawandisa, muviri unongotora zvakanyanya sezvazvinoda. Zvisinei, kuwedzerwa kwematokari kunogona kukonzera kushushikana kwepamuviri uye chirwere.
Vanotsvakurudza vanotaura kuti Magnesium L-threonate powder inogona kugadzirisa munda wekudya kwepfungwa nekubatsira munhu wese kuwana nekuchengetedza zvakanakisisa kugadzirisa basa pane imwe nhanho yehupenyu.
Zvinofadza, vatsvakurudzi veMIT vakaona kuti Magnesium L-threonate powder inokwanisa kuwedzera huwandu hwemagesium uropi hwako hunogona kuunwa. Kwete izvozvo chete, vatsvakurudzi vanoti Magnesium L-threonate powder yakagadzirisa zvose zvenguva pfupi uye kwenguva refu
Mukutsvakurudza kwepakutanga kwakabudiswa mumagazini yepamusoro yeNeuron mu2010, vaMIT vatsvakurudzo vakaongorora mafomu ose epo ewedzera ekuwedzera magnesium uye vakaratidzwa mumuenzaniso wemhuka iyo Magnesium L-threonate powder-uye Magnesium L-threonate powder chete-inokwanisa kukwira muuropi uye kuwedzera magesium. Mukuedza kwavo, kuwedzera uku mumakemikisi emagetsi kunokonzera kubudirira kunowanikwa mumakosha makuru ekufungisisa.
Magnesium Threonate Benefits
Kutsvakurudza kwepakutanga kwema magnesium threonate yakaitwa nevasayendisiti kuUCLA, asi zvidzidzo zvakapararira maererano nekuwanda kwezvikomborero. Chimwe chekubatsira kukuru kwemagesium threonate ndechokudya. Zvimwe kune hafu yegumi nemaviri emhando dzakasiyana dzemagesium, kusanganisira zvimwe zvinenge zvisingawanikwi zvachose, izvi ndezvisinganzwisisi uye zvinobatsira.
Kana kese magnesium yayambuka gadziro-yeropa, inoenda kumashandiro ekusimudzira chiyeuchidzo mukati mavo marefu uye mashoma-mazwi. Nemhaka yokuti magnesium inobatanidzwa nemakemikari anokurumidza kufambisa nzira dzakagadziriswa (kubatana muuropi), iyo mineral aid mukutora kwete kukurumidza kuyeuka, asiwo kuchengetedza ivo mukukwegura.
Imwe rubatsiro rwemagesium threonate kunaka kwekurara. Maererano nekuongorora kwe2002 mumagazini ye Pharmacopsychiatry, magnesium threonate inogadzirisa mamwe mapepa uye kutumidzwa kunonzi GABAergic uye glutamatergic. Masayendisiti akayera kuburikidza neEEG miedzo muuropi kuwana magesium threonate anobatsira muhutano hwekurara.
Nezvikonzero zvimwe chetezvo, vanhu vazhinji vanodya velesium vateereti vanonzwawo vasisina kunyanya kushungurudzika uye kunyanya kunetseka kudarika zvimwe.
Magnesium I-inopisa Mvura Yakakosha
Magnesium L-threonate powder Marketing
Nzira yekutenga Magnesium L-threonate powder kubva kuAASraw